အောင်သူငြိမ်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘိဇနက် (B4P) | MoeMaKa Burmese News & Media
ခုန ပြောဆိုခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်က သာမာန်လူတယောက်လိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ ပထမ အချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘာပါလဲ၊ အပစ်ရပ်စဲရေးထက်တော့ မြင့်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာတောင် စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်း ရေးဆိုတာမျိုး ရှိတော့ အဆင့်ဆင့် ရှိနိုင်တယ်လည်း ထင်မြင်မိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စီးပွားရေးအယူအဆ ဆိုတာ ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်စေနိုင်တဲ့၊ ပဋိပက္ခ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့၊ လူလူချင်း ရန်သတ်ဖက်ပြိုင် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဆိုရင် မလုပ်ဘူးပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ သင့်မြတ်ဖို့ တိုက်တွန်းမယ်ပေါ့။ စဉ်းစားမိပါတယ်။ (Blood diamond) “သွေးစွန်းတဲ့စိန်” ဆိုတာမျိုး ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို၊ ပဋိပက္ခ စစ်ပွဲတွေဖြစ်စေတဲ့ ရွှေတူးတာ၊ ကျောက်မြက်တူးဖော်နေတာ၊ သယံဇာတတူးဖော်နေတာတွေက ပဋိပက္ခစီးပွားရေးလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘိန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လက်နက်မှောင်ခို လုပ်ငန်း တွေလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုစီးပွားတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်လို့ ငွေမဲငွေဖြူလုပ်တာ၊ မှောင်ခို လူ ပစ္စည်းကုန်ကူးတာ စသည်တို့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ သစ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ၊ သယံဇာတထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ပါဝင် ပတ် သက်ဖို့ အကြောင်းများပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ သယံဇာတထုတ်လုပ်ငန်းတွေ၊ သံသယမကင်းဖွယ် ပုံမှန်မဟုတ် တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ (informal sector) တွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မှာပါလဲ။ ဒီလူတွေကမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ကုန်သည်ကြီးများအသင်းက ယခုဆောင် ရွက်နေတဲ့ ကျင့်ဝတ်စောင့်သိမှုအပေါ် ကတိကဝတ်ပြုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက လူကြီးလူကောင်း သဘောတူညီမှု (Gentlemen agreement) ပါ။ မလိုက်နာ မဆောင်ရွက်ရင် အရေးယူနိုင်တဲ့ (binding power) မရှိပါဘူး။ နာမည်ပျက်ရုံ၊ သိက္ခာကျရုံ သဘောပဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအပေါ် အစိုးရဖက်က ကတိကဝတ်ပြုမှု (political will) နဲ့ ဆုပေးဒဏ်ပေးကိစ္စများ (rewarding systems) များ လိုအပ်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း အဖိချစ် ဝိချာဇီဝ (Abhisit Vejjajiva) လက်ထက်မှာ အစိုးရက ဂုဏ်သိက္ခာ တည်ကြည်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (Integrity Pact) ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ဖူး ပါတယ်။ အစိုးရဖက်က လာဘ်မယူကြေး ကတိပေးပြီး၊ ကုမ္ပဏီများဖက်ကလည်း လာဘ်မပေးကြေး နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုကြတာပါ။ အဲဒီမှာ အစိုးရဖက်က ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီက လာဘ်စားမှုအန္တရာယ် အများဆုံးရှိနိုင်တဲ့ ဌာနတစ်ခု (risky department) ကို ရွေးချယ်ပြီး ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးစေမယ်၊ ကုမ္ပဏီများဖက်ကလည်း လက်မှတ်ထိုးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးပြီး လိုက်နာမှုကောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အစိုးရဖက်က “လာဘ်ပေးမှုကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်” (corruption free certificate) ကို ပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယခု NLD အစိုးရအနေနဲ့လည်း သတ္တိရှိ ရင် ဒီလို လာဘ်မပေးကြေး၊ လာဘ်မယူကြေး သဘောတူညီချက် ဖြစ်လာသည် အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စည်းကြပ်မှုမရှိနိုင်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကနေပြီး၊ ဆုပေးဒဏ်ပေးသဘော ပိုမိုလိုက်နာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ ပြဿနာလေးတွေလည်း ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မော်လမြိုင်က ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနဲ့ တွေ့ စဉ်မှာ သူတို့ကပြောတာ၊ “ကျနော်တို့က အခွန်ပေး၊ တရားဝင် ပစ္စည်းတင်သွင်း လုပ်ဆောင်တာမျိုး လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်လည်း ပြဿနာနည်း၊ ခေါင်းရှင်းပါတယ်။ အစိုးရအတွက်လည်း အခွန်ရရှိစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဆိုရင် ကျနော်တို့ပစ္စည်းတွေက အခြားနည်းအားဖြင့် သွင်းလာတဲ့ (ခိုးလမ်းကနေ၊ အခြားမှောင်ခိုနည်းဖြစ်စေ) ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဈေးချင်း မယှဉ်သာပါဘူး” လို့ ညည်းညူတာ ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခုလို ကျင့်ဝတ်လိုက်နာရေး ကတိပြုထားတဲ့ ကုမ္ပဏီများအပေါ် ‘မှောင်ခိုအားပေး၊ တရားမဝင်လုပ်ငန်း’ များဆီမှ ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းဖြစ်လာပါ တယ်။ အခြားပြဿနာ များစွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာက တရားမဝင်ကဏ္ဍ (informal sector) ကြီးထွားနေ ဆဲပါ။
5. Srivalo. Piyanart. Nov 3, 2010. Thai Anti-Graft Project Aims To “Shut The Door To Corruption”, The Nation.